Drafitra marketing amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny dingana 6 | Martech Zone
Ny haino aman-jery sosialy dia mitohy mandroso amin'ny maha-tambajotra, fihainoana, famoahana, fanampiana ary fampiroboroboana ho an'ny orinasa. Mivoatra ny doka amin'ny haino aman-jery sosialy, manome fomba bebe kokoa sy fikendrena mandroso izay mampihena ny vidin'ny fifandraisan-davitra. Ny sehatry ny fihainoana, ny famaliana, ny famoahana, ny fandrefesana ary ny fanatanterahana fanentanana dia miorina ary manohy manome tolotra lehibe ho an'ny orinasa.
Miaraka amin'ny sehatra media sosialy marobe izay misy ankehitriny, dia mora ny misavoritaka na tsy mahazo antoka ny fomba hamoronana paikady media sosialy ao amin'ny fiaraha-monina misy ifandraisany ankehitriny. Ny tambajotra sosialy dia iray amin'ireo làlana tsara indrindra hampiroboroboana ny marika manerantany. Miaraka amin'ny mpampiasa 2.7 miliara mahery eran'izao tontolo izao, tsy misy isalasalana fa manome media lehibe ny media sosialy ary misy fiatraikany lehibe amin'ny faran'ny orinasa. Emedia Creative
Nahafantatra zavatra betsaka hatrany izahay. Amin'ny ankabeazany, ny marika dia mianatra fa ny haino aman-jery sosialy dia fitaovana lehibe hananganana fahatsiarovan-tena sy hitondra fiara; fa tsy ny mpanelanelana tsara indrindra amin'ny varotra mivantana foana. Fantatsika ihany koa fa ny haino aman-jery sosialy dia namindra ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny forum ho an'ny daholobe izay mety hamaky momba ny tsy fetezan'ny marika ny mety ho mpanjifanay. Masinina matanjaka ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa izy io, saingy mety hahasosotra sy lafo izany raha tsy misy ny drafitra marketing amin'ny haino aman-jery sosialy.
Inona ny drafitra marketing amin'ny haino aman-jery sosialy?
Mba hananana vokatra tsara dia mila drafitra marketing amin'ny haino aman-jery sosialy ianao izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasao. Tokony ampidirina ao ny kaontinao ankehitriny amin'ny kaonty media sosialy, ny fanombananao ny lanjanao manoloana ny fifaninanana, ny tanjona kendrenao amin'ny ho avy, ary ny dingana sy ny fitaovana ampiasainao rehetra hahatongavana any.
Ny drafitra marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia toy ny drafitra ho an'ny hetsika rehetra nataonao, ary koa fomba iray hamaritana raha mahazo hery ny ezaka ataonao.
Dingana dingana momba ny varotra haino aman-jery sosialy
Mametraha tanjona sy tanjon'ny haino aman-jery sosialy - alao antoka fa mifanaraka amin'ny tetikadinao amin'ny varotra ankapobeny izy ireo mba hahazoana antoka fa ny paikadinao dia mitarika vokatra ara-barotra lehibe kokoa.
Manaova fanaraha-maso ny media sosialy - Makà sary avy amin'ny fanjakan'ny media sosialy ankehitriny ary ampitahao amin'ny mpifaninana aminao.
Mamorona na manatsara ny piraofilin'ny haino aman-jery sosialy - Rehefa vita ny fanaraha-maso nataonao dia tonga ny fotoana hanatsaranao ny fisian'ny media sosialy.
Fitaomam-panahy ho an'ny fianaranao amin'ny media sosialy - jereo ny hetsiky ny haino aman-jery sosialy an'ny mpifaninana sy ny piraofilina mifandraika amin'ny indostria hahitana ny fomba hanavahanao ny fanatrehanao.
Mamolavola drafitra atiny sy kalandrie fanontana - ny fandefasana sy fizarana atiny mifandraika matetika no lafiny lehibe indrindra hiantohana ny fahombiazana amin'ny media sosialy.
Araho, tombano, ary hatsarao ny drafitry ny varotra media sosialy - Ny fanaraha-maso sy fandrefesana tsy tapaka dia zava-dehibe toy ny fananana paikady fampiroboroboana amin'ny marketing ara-tsosialy.
Zahao ny antsipiriany rehetra, ny toro-hevitra ary ny toro-hevitra amin'ity infographic informative ity avy amin'ny Emedia Creative, Ahoana ny fananganana paikady media sosialy izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa.
Tags: atiny fanontaemedia famoronanaemediacreativefanaraha-maso ny media sosialyatiny media sosialyfifandraisan'ny media sosialySocial Media Marketingdrafitra marketing ara-tsosialydingana marketing ara-tsosialydrafitra media sosialymedia sosialydingana media sosialytanjon'ny haino aman-jery sosialy
Sep 13, 2017 amin'ny 1: 45 AM
Infographic be be .. Misaotra !!